Yohane Adiyisɛm 9 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Yohane Adiyisɛm 9 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Afei ɔbɔfo a ɔto so anum no hyɛn ne torobɛnto. Mihuu nsoromma a watew fi soro abɛhwe asase so. Wɔmaa no ebun a ase nni awiei safe. 2 Nsoromma no buee ebun no, na wusiw kumɔnn fi mu sɛ fononoo kɛse bi, na wusiw no maa owia hann ne mframa a ɛwɔ hɔ no yɛɛ tumm.
NA-TWI : Yohane Adiyisɛm 9